Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao Karaiba • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika • Indostrian'ny fihaonana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao momba ny dia any Mexico • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Nandray anjara tamin'ny WTTC Global Summit any Mexico ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika » Page 2
Fizahan-tany any Jamaika Ny minisitra Bartlett dia hanatevin-daharana ny Filoham-pirenena & Tale Jeneralin'ny US Travel Association, Roger Dow, Governoran'i Yucatán, Mauricio Vila Dosal; ary ny minisitry ny varotra ivelany & fizahan-tany ho an'i Peroa, Claudia Cornejo, tamin'ny 27 aprily, ho an'ny adihevitra. Ny fivoriana dia hiompana amin'ny andraikitry ny fanjakana amin'ny famelana ny tanjon'izy ireo hitombo maharitra sy hiara-hientana, ary koa hiantohana ny sehatry ny fiatraikany eo amin'ny lafiny sosialy.
Nanambara ny mpikarakara fa hisy ny mason-tsivana ara-pahasalamana sy fidiovana henjana napetraka, ao anatin'izany ny fanandramana eo an-toerana, ny fahafaha-manao voafetra mba hiantohana ny halavirana ara-batana, ary ny hetsika ivelan'ny trano misimisy, mba hiantohana ny fahasambaran'ny mpanatrika rehetra. Ho fanampin'izay, nametraka fepetra henjana izy ireo mba hamoronana bubble ary manome sosokevitra fatratra ny mpanatrika hijanona ao amin'ny Moon Palace complex, izay hampiantrano ny hetsika.
Ny Fihaonamben'ny Global WTTC isan-taona dia hetsika Travel & fizahan-tany manan-kery indrindra amin'ny kalandrie, izay hihaonan'ny mpitondra indostrialy avo indrindra amin'ny solontenan'ny governemanta mba handray andraikitra manoloana ny olana lehibe sy lehibe indrindra amin'ny fandaharam-potoana iraisam-pirenena. Amin'ity taona ity, ny Global Summit dia hijery ireo fanamby atrehana ary hanome sehatra hanarenana ny sehatra.
Izy io dia mitranga amin'ny endrika hybrid, ahafahan'ny olona mijery ireo fivoriana an-tserasera amin'ny alàlan'ny sehatra virtoaly. Ny Fihaonana an-tampony manokana dia hetsika fanasana ho an'ny Mpikambana WTTC, Minisitra governemanta ary vahinin'ny VIP voafantina ihany. Niala teto amin'ny nosy ny minisitra Bartlett tamin'ny 25 aprily ary nasaina niverina ny 28 aprily.